I-China Glow in the Dark Lapel Pins ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Ngemva kokukhanyisa ngokukhanya okuvamile, hambisa iphinikhodi ye-lapel ebumnyameni. Indawo enempushana ekhanyayo ikhanya ebumnyameni, okulula ukudonsa ukunaka kwawo wonke umuntu.
Sihlinzeka ngemibala eyahlukene yoqweqwe lwazo ukuze amakhasimende akhethe kuyo, ukuze iphinikhodi yakho yangokwezifiso ingasebenzisa koqweqwe lwawo olunemibala ehlukene ukugcwalisa izindawo ezihlukene noma ukugcwalisa iphinikhodi ngayo yonke.
Ngaphezu kwalokho, le powder ekhethekile ekhanyayo ingasetshenziswa ekukhanyiseni ukukhanya okujwayelekile, iphinikhodi yekhola ihanjiswe ebumnyameni, indawo enempushana ekhanyayo izokhanya ebumnyameni, idonse ukunaka.
Sinemibala eyahlukene yoqweqwe lwawo esingakhetha kuyo, ngakho iphinikhodi yakho yangokwezifiso ingasebenzisa i-koqweqweqwe lwawo olunemibala ehlukene ukugcwalisa izindawo ezihlukene noma ukugcwalisa ngayo iphinikhodi yonke.
Ngaphezu kwalokho, le mpushana ekhanyayo ekhethekile ingasetshenziswa kuzo zombili izinaliti zoqweqwe oluthambile neziqinile.
Okokuqala, ungaqhathanisa uqweqwe oluqinile nezinaliti ezithambile zoqweqwe lwazo imini nobusuku.
Okulandelayo, ngaphambi kokukhetha uqweqwe olumnyama lwephinikhodi yangokwezifiso, hlola ukukhanya kwezimpushana ezihlukene ze-noctilucent.
Umbala wokugcina wenaliti yoqweqwe lwawo uyathinteka, kuye ngokuthi yimuphi umbala wempushana okhanyayo esiwufakayo nokuthi singeza kangakanani.
Ngemva kokubuka imininingwane yesithombe ngenhla, ngiyaqiniseka ukuthi uzokhetha ubucwebe obukhazimula koqweqwe lwawo olumnyama ukuze wenze ngokwezifiso iphinikhodi yephathi yakho enkulu elandelayo noma umcimbi okhethekile.
Impushana ekhanyayo, ifaneleka koqweqwe lwawo oluthambile nezikhonkwane zoqweqwe oluqinile.
Singasebenzisa imibala ehlukene yempushana eyi-noctilucent ukuze sikhiqize ukukhanya okufanayo okuse-noctilucent, noma singasebenzisa umbala ngamunye ukuze sithole umbala ohambisanayo ne-noctilucent.
Izikhonkwane zangokwezifiso ezinokukhanya koqweqwe lwawo olumnyama zingasetshenziselwa ilogo, ifeni, izikhonkwane zesikhumbuzo, izikhonkwane zezigqoko, njll.
Njengephini lophawu, lidlala indima engenakushintshwa ekudaleni isimo somhlangano nokugqamisa isithombe somhlangano.
Uma ukukhanya koqweqwe lwawo olumnyama olusetshenziselwa izikhonkwane zangokwezifiso kuklanyelwe ukusetshenziswa njengephinikhodi kusigqoko sabalandeli, kuyoba okungakaze kwenzeke uma kuhlanganiswa nekhonsathi.
Noma dala iphinikhodi yangokwezifiso ekhanyayo koqweqwe lwawo olumnyama ukuze udale isithombe esiyi-spooky se-Halloween ezayo, esizokwenza ube inkosi nomlingiswa oyinhloko ebumnyameni be-Halloween.
Okwedlule: Izikhonkwane ze-Lapel ezikhazimulayo
Olandelayo: Koqweqwe lwawo oluqinile